Ngano: ndezvipi izvi, mhando dzengano uye mienzaniso inoshanda | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Type
Ngano dzinogara dzakabatana nenyaya dzevana. Asi chokwadi ndechekuti izvi hazvina kungotarisa pavari chete. Zvakare veruzhinji vanhu vakuru vanogona kuwana mabhuku engano akatarisana navo.
Uye ndezvekuti ibhuku rakanyatsoshanda rekuita kuti vaverengi vafunge, vafungisise uye pakupedzisira vawane mhedziso Asi, Ngano chii? Ndeapi maitiro avo? Kune mhando dzakasiyana here? Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvatiri kuzokurukura nhasi.
1 Chii ingano
2 Ngano hunhu
2.1 Chimiro chakanyatsotsanangurwa
2.2 Kunyorwa kwengano
2.3 Kune nguva dzose kutsoropodza kana hunhu
2.4 Panenge paine nguva dzose munyori
3 Mhando dzengano
4 Mienzaniso yengano
4.1 Iyo Snowball (Leonardo da Vinci)
4.2 Hare neKamba (Aesop)
4.3 Shumba murudo (Samaniego)
Zvinoenderana neRAE (Royal Spanish Academy), ngano dziri nyaya pfupi dzekunyepedzera, muprozi kana vhesi, zvine chinangwa chekuita kana kutsoropodza zvinowanzoratidzwa mune yekupedzisira tsika, uye umo vanhu, mhuka nezvimwe zvipenyu kana zvisina hupenyu zvinogona kupindira.. Mune ino kesi, uye tichitevera tsananguro, tinogona kuwana nyaya dzezvinyorwa, fungidziro, hukama hwenhema, nezvimwe.
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve a nyaya kana pfupi nyaya inotaura nyaya ine mavara anosvika kumagumo kwavanodzidza kubva kwavari, ndiko kuti, pane mhedziso nezve izvo zvaitika mune zvakaverengwa, zvinzwikwa kana kuratidzwa.
Kwakatangira ichi chinyorwa chinyorwa hachizivikanwe zvechokwadi. Zvisinei, vamwe mahwendefa evhu kubva panguva yeMesopotamiya uko kune mareferenzi engano. Kunyanya, mahwendefa aya ane nyaya yemakava makava, nzou dzinodada uye imbwa dzisina rombo rakanaka. Nekuti vaive vemaraibhurari echikoro, zvinofungidzirwa kuti aya aishandiswa kudzidzisa madiki.
Nechekare muchiGiriki chekare, zvinozivikanwa kuti ngano yekutanga yaive "Ngano yeNightingale." Izvi zvakaudzwa naHesiod muzana ramakore rechinomwe BC nechinangwa chekuti vafungisise nezvekururamisira. Vamwe vakashandisa zviwanikwa izvi, kunyangwe ivo vasinga nyanyo kunzi "ngano" vaive Homer, Socrates, kana Aesop (yatinoziva vazhinji vacho nhasi).
Sezvo nyika yakafambira mberi, muMiddle Ages ngano yakava imwe yeanofarira zviwanikwa zvekutaura nyaya. Pamusoro pazvose, ivo vaishandiswa nevapristi mukuyedza kudzidzisa vanhu mutsika uye zvakapusa.
Nekudaro, zvaive zvisipo kusvika iyo Renaissance kuti ngano dzaive ne "mugumo." Muchokwadi, hunhu saLeonardo da Vinci akanyora bhuku rengano; kana Guillaume Guéroult, Jean-Pons-Guillaume Viennet, Jean de La Fontaine (wekupedzisira weanozivikanwa kwazvo) ...
Pakati pehunhu hune ngano, tinogona kufunga zvinotevera:
Mune ino kesi, ichi chishandiso chakavakirwa pazvikamu zvitatu: kukumbira, uko vatambi vari kuzounzwa uye kugona kuona zvinotsanangura kana kuvaratidza; kuoma, inova iyo rondedzero inovhurika kusvika padanho rekukutungamira kune iro dambudziko pacharo; uye mhedzisiro, apo pane mhedzisiro, yakanaka kana yakaipa, zvine chekuita nesarudzo kana kuti chii chakaitika mukuomarara.
Izvi zvakanyorwa muprozi kana vhesi, havafanirwe kushandisa imwe fomu. Chinozivikanwa ndechekuti ivo vanofanirwa kuve nyaya pfupi, ndiko kuti, zvekuwedzera pfupi.
Kune nguva dzose kutsoropodza kana hunhu
Dzese ngano dzinowanzove ne kushoropodza mamwe maitiro, kana hunhu, ndiko kuti, kuraira kana mufambiro wakakodzera. Iyi tsika inowanzo kuve mutsara, stanza, chimwe chinhu chinobata uye chinorangarirwa zviri nyore.
Panenge paine nguva dzose munyori
Icho chimiro cheiyo murondedzeri ndiye anotaurira zvinoitika kune vatambi. Nekudaro, anova mumwe munhu akakosha kuti afunge nezvayo, nekuti mavara pachawo anongopindirana panguva yakatarwa, ndiye murondedzeri anoisa zvese zviri muchirevo.
Izvi hazvireve kuti mumwe wevatambi anogona kuve murondedzeri iye. Semuenzaniso, nyaya yemunhu anotaurira mumwe nyaya yake.
Kazhinji, isu tinopatsanura ngano zvakafanana. Asi chokwadi ndechekuti pane mhando dzakasiyana dzadzo. Kunyanya, iwe unogona kuwana manomwe akasiyana, anova anotevera:
Ngano dzeMhuka. Ndiwo akajairika, uko hukama hwakagadzwa pakati pemhuka, vanhu, vamwari ... asi chaizvo ivo protagonists imhuka. Mune mazhinji acho ane hunhu hwevanhu, senge chokwadi chekuti ivo vanotaura, kufunga, nezvimwe. uye vanoiswa mumamiriro ezvinhu anowanzoonekwa nevanhu kupfuura nemhuka.
Ngano dzevanhu. Izvo zvinogona zvakare kuitika, uko, mune ino kesi, vanhu ndivo protagonists venyaya uye avo vanotaura zvinoitika kwavari. Muchiitiko ichi, vanhu vanofambidzana nevamwe vanhu, nemhuka, nevamwari, zvisikwa zvisikwa ... Muchokwadi ivo havana kuganhurirwa kune vamwe mavara.
Ngano dzeumambo hwezvirimwa. Sezvakangoita zvakapfuura, mune ino nyaya ivo protagonists zvirimwa uye, semhuka, ivo vanopihwa hunhu hwakanyanya kutarisana nevanhu (sekutaura, kufamba, kufunga ...).
Ngano. Muchiitiko cherudzi urwu lwengano, iwe unowana vanamwari vanotsigira, ndokuti, ivo vachave vanamwari vane simba vanopa zvidzidzo nehungwaru hwavo, kana ivo pachavo vanodzidza chimwe chinhu kubva kune vamwe, vangave mhuka, vanhu, vamwe vamwari, nezvimwe. .
Zvinhu zvinopinza. Kunyangwe zvinhu kana zvinhu, izvi zvakare zvinogona kuve chikamu chengano. Mune ino kesi, muenzaniso unogona kunge uri Tin Soldier, yekutamba isina hupenyu ichiri kutaura nyaya.
Agonal. Izvi hazvizivikanwe, asi ndeimwe mhando yazvo. Ivo vanoreva kune vanopikisa mavara, ndiko kuti, kune protagonist uye anopikisa uye kupera kwenyaya kunotitungamira kuti tipe mubairo kune avo vanoita zvakanaka uye nekuranga mumwe. Mune ino kesi, haina kukosha zvakanyanya kuti protagonist ndiani, asi chii chinoitika uye kunyanya chidzidzo chekupedzisira, maererano nekupa mubayiro kune vakanaka nekuranga vakaipa.
Etiological. Mhando iyi inoreva kune ayo anoreva mamiriro enhoroondo. Panyaya iyi, vatambi vacho havana kukosha sezviitiko zvavanorondedzera nenzira inobatsira kuti nyaya izivikanwe asi neimwe nzira inovaraidza.
Chekupedzisira, heino mimwe mienzaniso yengano dzinogona kukubatsira iwe kudzidza zvakawanda nezvazvo.
Iyo Snowball (Leonardo da Vinci)
Paive nechando chechando pamusoro pebwe, paakafunga kuti:
-Hungatendi here ini ndichizvikudza uye ndichizvikudza nekuve munzvimbo yakakwira kudaro sezvo chando chese chiri chakadzika kupfuura ini? Ini ndiri mudiki zvekuti handina kukodzera kureba uku, kunyanya kana nezuro ndaigona kuona zvakaitwa nezuva kune vamwe vangu avo, mumaawa mashoma, vakanyungudika. Ini ndinofanira kuenda pasi ndotsvaga nzvimbo inokodzera saizi yangu diki.
Uye bhora rakatanga kudzika mujinga megomo, richitenderera pachando. Iyo yepazasi yaaienda, yakakura yaakawana, uye saka paakapedza pachikomo, akaona kuti saizi yake yakanga yawedzera zvakanyanya. Uye, aya ndiwo mabhora aive echando chekupedzisira chakanyungudutswa nezuva pakupera kwechando.
Hare neKamba (Aesop)
Rimwe zuva tsuro inodada uye inomhanya yakaona kamba ichifamba mumugwagwa ndokusvika pairi. Tsuro yakatanga kuseka imwe mhuka ichinonoka nekureba kwemakumbo ayo. Zvisinei, kamba yakapindura kuti yaive nechokwadi chekuti kunyangwe hazvo kumhanya kwetsuro, yaikwanisa kuihwina mumujaho.
Tsuro, iine chokwadi chekukunda kwayo uye ichitarisa dambudziko risingakwanise kurasikirwa, rakagamuchirwa. Ivo vaviri vakakumbira gava kuti vanongedze chinangwa, icho chaakatambira, pamwe negunguo rekuita semutongi.
Pakasvika zuva remakwikwi, pakutanga kwemujawo tsuro nekamba zvakasiya panguva imwe chete. Kamba yakaenderera mberi isina kumira, asi zvishoma nezvishoma.
Tsuro yaimhanya kwazvo, uye ichiona kuti yaive nemukana mukuru pamusoro pekamba, yakafunga kumira nekuzorora nguva nenguva. Asi pane imwe nguva tsuro akarara. Kamba, zvishoma nezvishoma, yakaenderera mberi.
Tsuro payakamuka, yakaona kuti kamba yakanga yoda kudarika mutsetse. Kunyangwe akamhanya, zvaive zvanyanyisa uye kamba yakazohwina mujaho.
Shumba murudo (Samaniego)
ko akakumbirei mukadzi wake
kuna Baba vake kufudza mumaguta.
Anotya asi akangwara murume,
«Ishe, muhana mangu ndinoshuva
dai mwanasikana wangu awana mukana,
asi varombo vajaira
kwete kusiya danga kana danga remakwai,
pakati pemakwai manyoro negwayana,
Ini zvimwe ndichafungidzira kuti une hasha.
Nekudaro, ini ndaizofunga
kana iwe uchibvuma kucheka nzara dzako
uye faira meno ako,
saka, mwanasikana wangu achaona kuti une hukuru,
zvinhu zvekukudzwa kwete zvekutsamwa.
Saizvozvowo munyoro Shumba murudo,
uye murume achikwanisa kumusiya asina zvombo,
buritsai muridzo mukuru
uye imbwa dzakashinga dzakasvika
iyo yemhanza yakaipa,
Shumba isina kuzvidzivirira yakaurayiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Ngano
Icho chishandiso chinoshamisa chekunyora. Dzidziso inoyevedza inosiya ngano yakanaka inogara kweupenyu hwese, ndinorangarira mamwe mabhuku aTío Tigre naTío Rabbit ayo muhudiki hwangu akandipa meseji huru.